ओप्पोको रेनो १०एक्स जुम इडिशन बजारमा | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि ओप्पोको रेनो १०एक्स जुम इडिशन बजारमा
ओप्पोको रेनो १०एक्स जुम इडिशन बजारमा
काठमाडौं । ओप्पोले नेपालमा रेनो १०एक्स जुम इडिशन सार्वजनिक गरेको छ । ओप्पोको नयाँ फ्ल्यागशिप रेनो सिरिजअन्तर्गतको यो फोन बजारमा आइतवारदेखि उपलब्ध भएको हो । ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनको प्रमुख आकर्षणको रूपमा १०एक्स लसलेस हाइब्रिड अप्टिकल जुम हो । ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनमा साइड–स्विङ सेल्फी क्यामेरा अर्को प्रमुख आकर्षणको रूपमा छ ।
८ जीबी र्‍याम र २५६ जीबी रोम संस्करणको मूल्य रू. ८९ हजार ९ सय ९० निर्धारण गरिएको छ । यो फोन जेट ब्ल्याक र ओशन ग्रिन गरी दुई रङमा उपलब्ध छ । ओप्पो १०एक्स जुम इडिशन पहिलोपटक चीन र लगत्तै यूरोपमा ओप्पो रेनो र ओप्पो रेनो फाइभजीका साथ सार्वजनिक गरिएको थियो ।
ओप्पो रेनो १० एक्स जुम इडिशन अल र ओएस ६ मा आधारित एन्ड्रोइड पाईमार्फत सञ्चालित हुन्छ । नयाँ फोनमा मोबाइल गेमिङ अनुभवमा उत्कृष्टता प्रदान गर्ने सोचका साथ फ्रेम बुस्ट र टच बुस्ट एक्सिलिरेशनसहितको गेम बुस्ट २ दशमलव शून्य एक्सिलिरेशन इञ्जिनयुक्त हाइपर बुस्ट पर्फर्मेन्स इन्ह्यान्समेन्ट पनि उपलब्ध छ ।
फोनमा क्यामेरा बम्प्स छल्न थ्रीडी कभ्र्ड ग्लास राखिएको छ । त्यसैगरी कुनै सतहमा यत्तिकै राख्दा क्यामेरा हल्का माथि उठाएर जोगाउन फोनको पछिल्तिर एउटा ओ–डट सेरामिक प्वाइन्ट पनि दिइएको छ । फोनमा अल्ट्रासोनिक इन–डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र सार्क फिन साइड स्विङ क्यामेरा डिजाइनको प्रयोग गरिएको छ । ६ दशमलव ६ इञ्च पानोरामिक एमोलेड डिस्प्लेसहितको ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनलाई शक्ति प्रदान गर्न ८ जीबी र्‍याम अप्शनका साथ ओक्टा–कोर स्न्यापड्रागन ८५५ एसओसीको प्रयोग गरिएको छ ।
ओप्पो नेपालका पीआर म्यानेजर सुरज महर्जनका अनुसार ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनमा एफ/१ दशमलव ७ लेन्स र लेजर अटोफोकसयुक्त ४८ एमपी सोनी आइएमएक्स ५८६ (शून्य दशमलव ५ इञ्च) सेन्सर ट्रिपल रियर क्यामेरा सेटअप राखिएको छ । क्यामेरा सेटअपमा पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्ससहितको १३ एमपी सेकेन्डरी सेन्सर र सुपर वाइड एंगल लेन्स भएको ८ एमपी टर्सिएरी सेन्सर पनि छ । एमडब्ल्यूसी २०१९ फेबु्रअरीमा प्रदर्शित गरिएझैं १०एक्स लसलेस अप्टिकल जुम सुचारुका लागि ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनमा १६–१६०एमएम फोकल लेन्थ कभरेज उपलब्ध छ । तस्विरमा अझ सटिकता र गुणस्तर प्रदान गर्न यसमा डुअल ओआईएस सपोर्ट पनि दिइएको छ । साथै यो ह्यान्डसेटले न्वाइज रिडक्शन, एचडीआर सपोर्ट र एआईमा आधारित अल्ट्रा नाइटमोड २ दशमलव शून्य र पोट्र्रेट मोड पनि सपोर्ट गर्छ ।
स्टिल शट्सका साथै ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनमा भिडियो रेकर्डिङ केन्द्रित विभिन्न फिचर्स पनि दिइएका छन् । यो फोनले ओआईएस सपोर्टका साथ फोरके ६०एफपीएस भिडियो सपोर्ट गर्छ । साथै यसमा रहेको तीन माइक्रोफोन सेटअपका माध्यमबाट यसले अडियो जुम रेकर्डिङ र थ्रीडी सराउन्ड अडियो क्याप्चरिङमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।
सेल्फीका लागि यसमा मात्र शून्य दशमलव ८ सेकेन्डमा खुल्ने साइड स्विङ सेल्फी क्यामेरा मोड्युलको व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त मोड्युल २ लाखपटक खोल्न र बन्द हुने कार्यका लागि परीक्षण गरिएको छ । फोनमा पोट्र्रेटका लागि ५ भिन्न मोड्सको व्यवस्था गरिएको छ ।
ओप्पो रेनो १०एक्स जुम इडिशनमा २ सय ५६ जीबी इन्ब्युल्ट स्टोरेज अप्शन दिइएको छ । कनेक्टिविटीका लागि फोनमा फोरजी एलटीई, वाईफाई, ब्ल्यूटूथ, डुअल जीपीएस, एनएफसी र यूएसबी टाइप–सी पोर्टको व्यवस्था पनि छ । साथै फोनमा भोक ३ दशमलव शून्य सपोर्ट सहितको ४ हजार ६५ एमएएच क्षमताको ब्याट्री जडान गरिएको छ ।
ओप्पोका ए७ र ए३एसको मूल्य समायोजन, नयाँ मूल्य कति ?
ओप्पोलाई क्यानस्टार ब्लू अवार्ड